Cristiano Ronaldo oo ku Guuleystey abaal marinta UEFA Men’s Player of the Year +SAWIRRO. – Cayaaraha dunida
Cristiano Ronaldo oo ku Guuleystey abaal marinta UEFA Men’s Player of the Year +SAWIRRO.
Cayaaryahanka kooxda kubada Cagta Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa ku Guuleystey abaal marinta Cayaaryahanka ugu fiican kooxaha yurub 2017 Waxaana ay u ahayd markii 3 aad ee ku Guuleysto,
Cristiano Ronaldo ayaa kula tartamay abaal marinta UEFA Best Player labada Cayaaryahan ee kala ah Lionel Messi iyo Gianluigi Buffon waxaana u Codeeyey 80 Macalin oo kooxahoodu dheeleen Xiligii la soo dhaafay koobabka Champions League iyo Europa League iyo 55 Saxafi oo ka diiwaan gashan Warbaahinta qaarada iyada oo uu kaalinta koowaad ku soo baxay Ronaldo.
Ronaldo aya helay 482 Cod halka Lionel Messi oo kaalinta u galay uu helay 141 Cod Goolhayahay Juventus Gianluigi Buffon ayaa helay 109 Cod dhamaan Codadkii la dhiibtay waxaana meesha ka muuqata in Ronaldo uu dhibco caqli ka fooq ah kasareeyey Messi sidoo kalana waxay Tusaale u Noqon kartaa sida Ronaldo ugu Guuleysan doono abaal marinada kale ee ay ku tartami doonaan.
Cristiano Ronaldo oo Xiligii la soo dhaafay u qaaday kooxdiisa koobab badan oo muhiim ah ayaa sidoo loo doortay Weeraryahankii ugu fiicnaa dhamaan Cayaartoyda kooxaha yurub waxaana lafilayaa in uu ku guuleysan doono abaal marino kale oo aad muhiim u ah.
Sidoo kale Gabdha lagu Magacaabo Lieke Martens ayaa ku Guuleysatay abaal marinta gabdhaha ee women’s player of the year Waana Gabar u dhalatay dalka Holland oo koox ahaan u cayaarta Barcelona.
Waxaa kaloo jirey abaal marino labixiyey sida Goolhaye Gianluigi Buffon.oo loo doortay kii ugu fiicnaa Xili Cayaareedkii la soo dhaafay daafaca Xili Cayaareedka qaarada yurub ayaa isna loo doortay Sergio Ramos oo Real Madrid u Cayaara halka Laacibka khadka dhexe isna lagudoonsiiyey Luka Modric oo isla Real Madrid u Cayaara.
Abaal marintaan ah in labixiyo boosaskii ugu fiicnaa Xili Cayaareedka waa markii koowaad ee labixiyo waxaana horay loo magacaabi jirey 11 ka Cayaaryahan ee ugu fiicaa Xili Cayaareedka.